Fil d'actualités du 16/01/2018
16/01/2018 - 15:30 : Nody mandry omaly teo amin’ny faha 74 taonany ilay mpihira Amerikana Edwin Hawkins, fantatra amin’ilay hira hoe”Oh Happy day”.
16/01/2018 - 15:00 : CACAO : Nihena ny vokatra cacao noho ny fandalovan’ny rivodoza Ava ary ny vidiny koa dia nihena 600 Ariary raha ny nambaran’ireo mpamboly any Sambava.
16/01/2018 - 14:30 : SOLIDARITE DES JOURNALISTE MORONDAVA : Nanao fanambarana izy ireo fa tokony hisy zavatra hivoaka ny fakana am-bavany ny mpanao gazety 1 tamin’ny famoahana vaovao momba ny fanondranana sokatra any amin’ny zandary fa tsy fampihorohorona mpanao gazety fotsiny hoy ireo mpanao gazety any Morondava.
16/01/2018 - 14:00 : BORIBORITANY FAHA-2 : Hitsahatra tsy hiasa intsony ireo mpiasa ao rampitso raha tsisy ny fanapahan-kevitra raisin’ny kaominina mahakasika ilay Delegué hoy ny sendikan’ny mpiasa ao.
16/01/2018 - 13:30 : MPIANATRA ENY ANKATSO : Nolavin’ny mpianatra ny andininy faha-2 tamin’ilay fehin-kevitra nivoaka izay milaza fa ny vatsim-pianarana ny volana hitsahina ihany no ho azo.
16/01/2018 - 13:00 : FAMPIANARANA : Ahemotra 2 herinandro amin’ny daty voatondro ny fanadinam-panjakana sahanin’ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena toy ny CEPE, BEPC,CAE, CAPE.
16/01/2018 - 12:30 : MAHAJANGA: Mpianatra 3 no nosamborina omaly noho ny fanakorontanana ireo mpiantra hafa manao fanadinana.
16/01/2018 - 12:00 : RIVODOZA AVA : Tafiakatra 51 no maty ary 22 tsy hita popoka tamin’ny fandalovan’ny rivodoza Ava teto raha ny tatitra navoakan’ny BNGRC ny alatsinainy teo.
16/01/2018 - 11:30 : JIRAMA : Araka ny tatitry ny tale jeneralin’ny Jirama dia mpanjifa 2000 amin’ny 20 000 natao fanadihadiana nanomboka ny volana Oktobra no tratra nangalatra herin’aratra.
16/01/2018 - 11:00 : MPIANATRA ANKATSO : Tsy eken’ny mpianatra mipetraka enyamin’ny cité ny hananganana cybercafé ao amin’ny salle d’étude noho ny fahateren'ny toerana.